mercredi, 21 septembre 2016 10:01
Toliara : Ramatoa iray nitondra môtô naratra mafy nofaohan’ny fiara
Vehivavy iray manodidina ny 40 taona no vaky loha sy tapa-tongotra, ary tsy mbola mahatsiaro tena tratry ny lozam-pifamoivoizana, ny alatsinainy teo, tany amin’ny distrikan’i Toliara II, tamin’ny lalam-pirenena fahasivy. Araka ny vaovao voaray dia nofaohana fiara tao anaty fiolanana ny môtô nentiny ka potika tanteraka vokatry ny fandehanana mafy. Noho ny fahavitan’ny RN 9 dia maro amin’ireo mpampiasa an’ity lalam-pirenena ity no halaim-panahy amin’ny hafainganam-pandeha, na ny kodiaran-droa io na ireo fiara ka matetika mitera-doza noho ny tsy fanajana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana.
mercredi, 21 septembre 2016 09:01
Hafari Malagasy: Naverina eny Antanimora ny filohany
Nandalo teny amin'ny fitsarana Anosy omaly ny raharaha nitoriana an'i Jean Nirina RAFANOMEZANTSOA filohan'ny Hafari Malagasy. Naverin'ny mpitsara eny Antanimora aloha i Jean Nirina RAFANOMEZANTSOA noho ny fangatahin'ireo mpitory azy fanemorana, ka amin'ny 18 oktobra ho avy izao indray no hiverina eny amin'ny fitsarana izy. Mbola maro moa ny fitoriana miandry azy ankoatry ny efa nisy teo aloha.
mercredi, 21 septembre 2016 09:00
Ambilobe-Vohémar : Mampiteny ny moana ny harantsian-dalana
Tsy misy fotoana tsy mampanahirana amin’ity lalana ity na maina na manorana. Sarotra ny famoahana vokatra any ka anisany mampidangana ny vidin-javatra aty amin'ny SAVA. Lalana eo amin'ny 162 km monja anefa Ambilobe-Vohémar. Mbola nofinofy ny hahavitany na dia tsy afaka ambavan'ny mpitondra aza rehefa mitsidika aty SAVA ny hanamboatra azy saingy fampanantenana poakaty hatrany izany hatreto.
mardi, 20 septembre 2016 20:36
Fifaninana sary momba ny ranomasina : Notolorana loka i Dadou Hirina izay nahazo voalohany
Nandritra ny fijerena ilay horonantsary “The Last Ocean” androany tetsy amin’ny auditorium American Center, Tanjombato-Antananarivo no nanoloran'ny Mpiandraikidraharaha amerikana Stephen Enderson ny loka ho an’Atoa Dadou Hirina izay nahazo voalohany tamin’ny fifaninana sary momba ny ranomasina izay natao manerana an’i Afrika Atsinanana. Mari-pakasitrahana sy fikantsary GoPro miaraka amin’ny boky momba ny ranomasina sy fitaovana fitondra milomano no nomena azy tamin’izany.
mardi, 20 septembre 2016 12:15
Fianarantsoa : Hatsangana ny « Guichet de l'Orientation »
Fantatra tao anaty atrikasa fanomanana fiaraha-miasa eo amin'ny foibem-paritra manofana arak'asa sy ny PROSPERER ho fampidirana ny tanora eo amin'ny sehatry ny fihariana fa hatsangana eto Fianarantsoa ny antsoina hoe « Guichet de l'Orientation » afaka iray volana eo ho eo. Tanora tantsaha no kendrena. Distrika dimy no voakasik'izany. Tanterahina eto Matsiatra Ambony ny 16 ka hatramin'ny 23 septambra ny atrikasa fanomanana izany.
Page 297 sur 380